Qlone, uhlelo lokusebenza lokuskena lwe-3D ngokuphelele | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Qlone, uhlelo lokusebenza lokuskena lwe-3D ngokuphelele
Lapho sesingene ezweni lokuphrinta kwe-3D, cishe ngaso sonke isikhathi ngoba sesike sazama ukuzama ukuthenga iphrinta yasekhaya, sifuna ukuqhubeka kancane ngoba kubonakala kuyisidina ukulanda amadizayini asevele enziwe sawaphrinta. Kulesi sinyathelo singaqala ukuzama izinhlelo ezahlukahlukene noma sithole Iskena se-3d ongakopisha ngayo izinto.
Ngaphakathi kwaleli zwe eliyinkimbinkimbi, kuze kube manje iqiniso ukuthi izinhlelo ezingasinikeza imiphumela emihle kakhulu ziyabiza, omunye uvele nje wabhabhadiswa njengo qlone, isicelo samahhala sokuskena izinto ezincane ezenziwe yinkampani I-Eyecue Vision Technologies, okuthi, ngokuhamba kwesikhathi, inolwazi olukhethekile ekubonweni kwezithombe nezixazululo zangempela ezibonakalayo.
I-Qlone iyi-software yamahhala eyenziwe yinkampani ye-Eyecue Vision Technologies
Akufanele futhi sicabange ukuthi sikhuluma ngesoftware esezingeni eliphansi, yingakho-ke imahhala, ngoba kuze kube manje i-Eyecue Vision Technologies isebenze ngokubambisana nezinye izinkampani ekwakheni izicelo zazo ezifana neLEGO, iBandai kanye nePlaymobil.
Kungemva kwalolu hlobo lomsebenzi, olusezingeni eliphezulu futhi oluhehayo, lapho i-Eyecue Vision Technologies yaqunga isibindi ukwenza lokho esikwaziyo manje njengeQlone, uhlelo ungakha imodeli eyinkimbinkimbi ye-3D usebenzisa ikhamera elula ye-2D njengaleyo efike ifakwe yonke i-smartphone emakethe namuhla.
Uma unentshisekelo kulesi siphakamiso futhi ufuna ukusizama, vele ukutshele ukuthi, okokuqala, kufanele uprinte ishidi ngephethini ye-chess. Leli shidi linikezwa uhlelo lokusebenza uqobo futhi luyisihluthulelo enqubeni ngoba kufanele ubeke into ezoskenwa ngenhla nje kwayo. Lapho ukuskena kwe-3D sekuqediwe ungakwazi thekelisa imiphumela ngefomethi ye-.OBJ noma ye-.STL ukuze uqhubeke nokuthinta kabusha noma yiluphi uhlobo lwesici kukhompyutha.
Njengomniningwane wokukutshela ukuthi yize uhlelo lokusebenza lumahhala, iqiniso yilokho thekelisa imodeli uma inezindleko okungaba kusuka ku-0,44 euros kuye ku-1,09 euros kuya ngosayizi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » I-Qlone, uhlelo lokusebenza lokuskena lwe-3D ngokuphelele
I-Arduino Dala iza ku-Chrome OS yezwe lezemfundo
Sikhuluma ngokunyathelisa kwe-DMLS, ukuphrinta kwe-3D kwezinto zensimbi